मधुमेह भएमा के के समस्या देखिन्छन् ? - Health Today Nepal
April 30th, 2018 बिशेषज्ञ लेख0comments
डा. अमिरा अधिकारी,
मधुमेहलाई हामीले सामान्य स्वास्थ्य समस्याको रूपमा कदापि लिनु हँुदैन । यसले शरीरका विभिन्न भागमा असर गर्छ । यसको असर छाला, हात खुट्टा, मिर्गौला, दाँत, गिजा, आँखालगायतका शरीरका महत्वपूर्ण अंगमा पर्छ । मधुमेह भनेको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा अचानक आवश्यकताभन्दा कम हुनु र रगतमा चिनीको मात्रा धेरै बढी हुनु हो । शरीरमा अचानक ग्लुकोजको मात्रा बढी हुनुलाई हाइपोग्लाइसेमिया भनिन्छ, भने शरीरमा चिनीको मात्रा बढी भएर हुने मधुमेहलाई हाइपरग्लाइसेमिया भनिन्छ । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा कम भए यी समस्या आउछन । सामान्य अवस्थामा रगतमा भएको ग्लुकोजको मात्रालाई व्यायाम गरेर र खानामा ध्यान दिएमा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । तर रगतमा ग्लुकोजको परिणाम २४० एमजी वा सोभन्दा बढी भएमा शरीरमा किटोन भन्ने हानिकारक रसायन उत्पादन हुन सक्छ । रगतमा किटोन बढी भएमा श्वासप्रश्वासमा समस्या हुनु, मुखबाट कुहिएको फलफूलको जस्तो गन्ध आउनु, वाक्वाक् आउनु, बान्ता हुनु, मुख सुक्खा हुने हुन्छ ।
वास्तवमा किटोननामक रसायन शरीरले आवश्यक शक्तिको रूपमा चाहिने मात्रामा ग्लुकोज उपयोग गर्न नसकेपछि विकल्पको रूपमा बोसोलाई टुक्राएर शक्ति उत्पादन गर्न खोज्छ । यसै क्रममा शरीरमा शक्तिसँगै किटोननामक रसायनको पनि निमार्ण हुन्छ । मधुमेहले शरीरमा निम्त्याउने समस्या :
१. छालाका समस्याहरू :
मधुमेहका कारण छालामा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न थाल्छन् । रगतमा चिनीको मात्रा धेरै भएकाले कीटाणुहरू छालामा बाँचिरहेका हुन्छन् । यसले गर्दा सानोतिनो घाउ पनि निको नै नहुनु वा निको हुन सामान्यभन्दा धेरै नै समय लाग्ने हुन्छ । यो मधुमेहको पहिलो लक्षण पनि हो ।
२. आँखाका समस्याहरू :
आँखामा जलबिन्दु, मोतीबिन्दुजस्ता समस्याहरू आउनुका साथै धमिलो दृष्टि हुनु, कालो दाग वा बिजुली चम्किएको जस्तो झिमिकझिमिक देखिन सुरु हुन्छ । यस्तो भएमा जति सक्दो छिटो चिकित्सकको सल्लाह लिनु पर्छ ।
३. खुट्टाका समस्याहरू :
मधुमेहीहरूलाई खुट्टाको चेतना नै हुँदैन । खुट्टाको चेतना नभएको अवस्थामा त्यहाँ भएका नसाहरूमा खराबी हुन्छ यसलाई लभगचयउबतजथ भनिन्छ । रक्त प्रवाहमा कमी भएर पनि खुट्टामा चेतनाको कमी हुन्छ । जसले गर्दा खुट्टामा घाउहरू भएमा पनि थाहा हुँदैन । त्यसैले दिनहँु खुट्टाको हेरविचार र स्याहार गर्न एकदम जरुरी छ ।
४. दाँत, गिजा तथा मुखको समस्याहरू :
हरेकपल्ट खाना खाएपछि खाँत सफा गर्नका साथै मुख कुल्ला गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मुखमा हुने विभिन्न प्रकारका समस्याहरूलाई कम गर्न सकिन्छ । होसियारीका साथ दाँतमा ब्रस गरे गिजामा चोटपटक पनि लाग्दैन र मुख सफा हुन्छ ।
५. मिर्गौलाको समस्याहरू :
सामान्यतया मृर्गौलाले रगतबाट शरीरलाई नचाहिने वा हानिकारक हुन सक्ने कुराहरूलाई रगतबाट छानेर शरीर बाहिर फाल्छ तर रगतमा भएका प्रोटिनहरूलाई चाँिह शरीरभित्रै राख्छ । मधुमेह भएको खण्डमा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै हुन्छ । यसले गर्दा मिर्गौलाले रगतलाई धेरै छानिरहने हुन्छ । यसरी रगतलाई बढी मात्रामा छान्न परेकाले मिर्गौलामा बढी चाप पर्छ र त्यसको कार्यक्षमता कम हुँदै जान्छ । धेरै वर्षपछि मिर्गौलाले प्रोटिनलाई छानेर शरीरमा राख्न पनि सक्दैन र पिसाबबाट बाहिरिन्छ । सो अवस्थालाई माइक्रो एल्बुमिनुरिया भनिन्छ र मिर्गौलाको कार्यक्षमता कम भएको अवस्थालाई मधुमेहको नेफ्रोप्याथी भनिन्छ ।
Previous article सुरक्षित गर्भपतन : ‘बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड र नबुझ्नेका लागि खुर्पाको बिँड’
Next article बेलायतमा उपचार गरि ६ महिनापछि फर्के डा. देवकोटा